Apple Aipods2ကနေ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်မလဲ??? - PX
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က iOS 12 Beta Version အသစ်ကြောင့် Apple AirPod2မှာပါဝင်လာနိုင်မယ့် Feature တစ်ခု ပေါက်ကြားခဲ့ရပါတယ်။ Developer တွေအတွက်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ iOS 12.2 မှာ ပါရှိခဲ့တဲ့ ဒီ Feature ကတော့ AirPod ဒါမှမဟုတ် iPhone ကနေတစ်ဆင့် “Hey, Siri.” ဆိုပြီး Voice Command ပေးရုံနဲ့ Siri ကို Activate လုပ်နိုင်မယ့် Feature ပါ။ Apple အနေနဲ့လည်း 1st Generation ဖြစ်တဲ့ Airpods ထွက်ရှိထားတာဟာ ၂ နှစ်သက်တမ်းကို ကျော်လွန်လာခဲ့ပြီမို့ သူ့ရဲ့ Successor ဖြစ်လာမယ့် Airpods2ကို ဒီနှစ်ထဲမှာ မိတ်ဆက်လာနိုင်ခြေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Apple Airpods2မှာ ဘယ်လို Feature သစ်တွေ ပါဝင်လာနိုင်မလဲ?
အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ “Hey, Siri.” Feature ဟာ Airpods2မှာ Voice Command ဆိုတာထက် ပိုလာနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နားကြပ်တပ်ထားချိန်မှာ ဘေးလူတစ်ယောက်ကနေ Voice Command ဝင်ပေးနိုင်တာဟာ Smart မဖြစ်ဘူးလို့ Apple အနေနဲ့ ယူဆထားနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
– Better W Series Chipset
လက်ရှိ Airpods တွေဟာ User ရဲ့အသံကို မှတ်သားနိုင်လောက်တဲ့အထိ စွမ်းရည်မမြင့်မားဘူးလို့ အများက ယူဆထားကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Airpods2မှာ Performance ပိုကောင်း၊ Energy Efficient ပိုဖြစ်မယ့် Wireless Chipset နဲ့အတူ Connection Range ပိုကျယ်ပြန့်တဲ့ Bluetooth 5.0 ကိုပါ ထည့်သွင်းလာနိုင်ခြေရှိပါတယ်။
– Better Design and Touch Control
ဒါဟာ လက်ရှိ Airpods Design ကို ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ EverythingApplePro ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရတော့ Apple ဟာ Earpiece နေရာတစ်ခုထဲမကပဲ နားကြပ်ကျောဘက်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကို Touch Support အဖြစ် သုံးနိုင်မယ့် Flat Design ကို သုံးလာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ (လက်ရှိ Airpods မှာလို နေရာတစ်ခုထဲကို Touch လုပ်နေရတာထက် အသံအတိုးအလျှော့ကို နားကြပ်လေးပွတ်ပြီး လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီး Smart ဖြစ်မှာ အသေချာပါပဲ)
ဒါကတော့ လက်ရှိ Airpods User တွေ မျှော်လင့်နေတဲ့အချက်လည်း ဖြစ်လောက်မှာပါ။ (အနည်းဆုံးတော့ Apple Airpods2ကို Black Version နဲ့သာ မြင်လိုက်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်တောင် လှလိုက်မလဲဆိုတာ မြင်ယောင်ကြည့်ကြပေါ့)
Apple ဟာ Health Care ပိုင်းမှာ အတော်လေးအားစိုက်လာတာကို Apple Watch4လို Product မျိုးက သက်သေပြနေပါတယ်။ Airpods2မှာ ပါဝင်လာဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံး Heath Feature ၃ ခုအဖြစ် EverythingApplePro အနေနဲ့ ခန့်မှန်းထားတဲ့အထဲမှာ ၂ခုကတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလို ဖြစ်နိုင်ခြေလည်းများပါတယ်။
ပထမတစ်ခုက အပူချိန်တိုင်းတာမှုပါ။ Airpods အနေနဲ့ နားအတွင်းပိုင်းက အပူချိန်ကို တိုင်းတာပေးမယ့် Digital ear Thermometer တစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒုတိယတစ်ခုက Pulse Oximetry ပါ။ ဆိုလိုတာက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာ Body ရဲ့ Oxygen ကို တိုင်းတာတဲ့ ကိရိယာအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်မှာမျိုးပါ။ (ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပေးနိုင်မယ့် နားကြပ်မျိုး Apple က ထုတ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ Innovative Idea လို့တောင် သတ်မှတ်လို့ရနေပါပြီ)
Apple အနေနဲ့ မနှစ်ကတည်းက iPhone, Apple Watch စတာတွေကို တစ်ပြိုင်နက်အားသွင်းနိုင်မယ့် Airpower ဆိုတဲ့ Wireless Charger အကြီးစားကို ဈေးကွက်ထဲပို့နိုင်ဖို့ကြိုးစာနေတာကြည့်ရင် Airpods2ကိုလည်း Wireless Charging Support နဲ့အတူ ပွဲထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေအရမ်းနည်းပေမယ့် iPhone အသစ်တွေမှာ Reverse Charging လို Feature မျိုးသာ ပါဝင်လာခဲ့ရင် Airpods2နဲ့ တွက်ဖက်အသုံးပြုနိုင်မယ့် Feature တစ်ခုလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
– Airpods as an iPod?
Apple အနေနဲ့ ဒီနှစ်ထဲမှာ iPod Generation အသစ်ကို မိတ်ဆက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ တကယ်လို့များ Apple မိတ်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့ iPod ဆိုတာ iPod Touch မဟုတ်ပဲ Airpods ကို iPod လို Music Streaming Device အနေနဲ့ အသုံးပြုလာနိုင်မယ် ဆိုရင်ရော? (ဟုတ်သည်ရှိ၊ မဟုတ်သည်ရှိ Airpods ရဲ့ ဘူးအဖုံးရှေ့မျက်နှုာစာကို ဟိုးအရင် iPod တွေတုန်းကလို Play, Pause ခလုတ်လေးတွေနဲ့ iPod Shuffle အဖြစ်သာ မြင်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်တောင် ကြည်နူးစရာ ကောင်းလိုက်မလဲ)
လောလောဆယ်တော့ iPod (အဲလေ) Airpods2ရဲ့ ထွက်ရှိနိုင်မယ့်ရက်ကိုတော့ မသိရသေးပေမယ့် ၂၀၁၉ ဇွန်လမတိုင်ခင်မှာ မြင်တွေ့ရနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ ဒီတော့ Airpods2သာ တကယ်ထွက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် သူနဲ့အတူ ခင်များတို့ရော Apple ရဲ့ ဘယ် Product အသစ်တွေကို အတူတွဲပြီး ထွက်လာစေချင်သေးလဲ?
Apple Aipods2ကနေ ကြှနျတျောတို့ ဘာတှမြှေျောလငျ့နိုငျမလဲ???
လှနျခဲ့တဲ့ရကျအနညျးငယျက iOS 12 Beta Version အသဈကွောငျ့ Apple AirPod2မှာပါဝငျလာနိုငျမယျ့ Feature တဈခု ပေါကျကွားခဲ့ရပါတယျ။ Developer တှအေတှကျထုတျပေးခဲ့တဲ့ iOS 12.2 မှာ ပါရှိခဲ့တဲ့ ဒီ Feature ကတော့ AirPod ဒါမှမဟုတျ iPhone ကနတေဈဆငျ့ “Hey, Siri.” ဆိုပွီး Voice Command ပေးရုံနဲ့ Siri ကို Activate လုပျနိုငျမယျ့ Feature ပါ။ Apple အနနေဲ့လညျး 1st Generation ဖွဈတဲ့ Airpods ထှကျရှိထားတာဟာ ၂ နှဈသကျတမျးကို ကြျောလှနျလာခဲ့ပွီမို့ သူ့ရဲ့ Successor ဖွဈလာမယျ့ Airpods2ကို ဒီနှဈထဲမှာ မိတျဆကျလာနိုငျခွေ ရှိနပေါတယျ။ ဒါဆိုရငျ Apple Airpods2မှာ ဘယျလို Feature သဈတှေ ပါဝငျလာနိုငျမလဲ?
အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့ “Hey, Siri.” Feature ဟာ Airpods2မှာ Voice Command ဆိုတာထကျ ပိုလာနိုငျခွရှေိပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ နားကွပျတပျထားခြိနျမှာ ဘေးလူတဈယောကျကနေ Voice Command ဝငျပေးနိုငျတာဟာ Smart မဖွဈဘူးလို့ Apple အနနေဲ့ ယူဆထားနိုငျတာကွောငျ့ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
လကျရှိ Airpods တှဟော User ရဲ့အသံကို မှတျသားနိုငျလောကျတဲ့အထိ စှမျးရညျမမွငျ့မားဘူးလို့ အမြားက ယူဆထားကွပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ Airpods2မှာ Performance ပိုကောငျး၊ Energy Efficient ပိုဖွဈမယျ့ Wireless Chipset နဲ့အတူ Connection Range ပိုကယျြပွနျ့တဲ့ Bluetooth 5.0 ကိုပါ ထညျ့သှငျးလာနိုငျခွရှေိပါတယျ။
ဒါဟာ လကျရှိ Airpods Design ကို ရုပျဆိုးတယျလို့ ပွောတာမဟုတျပါဘူး။ EverythingApplePro ရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြအရတော့ Apple ဟာ Earpiece နရောတဈခုထဲမကပဲ နားကွပျကြောဘကျမကျြနှာပွငျတဈခုလုံးကို Touch Support အဖွဈ သုံးနိုငျမယျ့ Flat Design ကို သုံးလာနိုငျတယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ (လကျရှိ Airpods မှာလို နရောတဈခုထဲကို Touch လုပျနရေတာထကျ အသံအတိုးအလြှော့ကို နားကွပျလေးပှတျပွီး လုပျနိုငျမယျဆိုရငျ ပိုပွီး Smart ဖွဈမှာ အသခြောပါပဲ)
ဒါကတော့ လကျရှိ Airpods User တှေ မြှျောလငျ့နတေဲ့အခကျြလညျး ဖွဈလောကျမှာပါ။ (အနညျးဆုံးတော့ Apple Airpods2ကို Black Version နဲ့သာ မွငျလိုကျရမယျဆိုရငျ ဘယျလောကျတောငျ လှလိုကျမလဲဆိုတာ မွငျယောငျကွညျ့ကွပေါ့)
Apple ဟာ Health Care ပိုငျးမှာ အတျောလေးအားစိုကျလာတာကို Apple Watch4လို Product မြိုးက သကျသပွေနပေါတယျ။ Airpods2မှာ ပါဝငျလာဖို့ ဖွဈနိုငျခွအေမြားဆုံး Heath Feature ၃ ခုအဖွဈ EverythingApplePro အနနေဲ့ ခနျ့မှနျးထားတဲ့အထဲမှာ ၂ခုကတော့ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးသလို ဖွဈနိုငျခွလေညျးမြားပါတယျ။
ပထမတဈခုက အပူခြိနျတိုငျးတာမှုပါ။ Airpods အနနေဲ့ နားအတှငျးပိုငျးက အပူခြိနျကို တိုငျးတာပေးမယျ့ Digital ear Thermometer တဈခုအဖွဈ ဆောငျရှကျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ဒုတိယတဈခုက Pulse Oximetry ပါ။ ဆိုလိုတာက လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတဲ့အခါမှာ Body ရဲ့ Oxygen ကို တိုငျးတာတဲ့ ကိရိယာအဖွဈ အသုံးပွုနိုငျမှာမြိုးပါ။ (ကိုယျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးကို အထောကျအကူပေးနိုငျမယျ့ နားကွပျမြိုး Apple က ထုတျလာခဲ့မယျဆိုရငျ ဒါဟာ Innovative Idea လို့တောငျ သတျမှတျလို့ရနပေါပွီ)
Apple အနနေဲ့ မနှဈကတညျးက iPhone, Apple Watch စတာတှကေို တဈပွိုငျနကျအားသှငျးနိုငျမယျ့ Airpower ဆိုတဲ့ Wireless Charger အကွီးစားကို ဈေးကှကျထဲပို့နိုငျဖို့ကွိုးစာနတောကွညျ့ရငျ Airpods2ကိုလညျး Wireless Charging Support နဲ့အတူ ပှဲထှကျလာနိုငျပါတယျ။ နောကျတဈခကျြကတော့ ဖွဈနိုငျခွအေရမျးနညျးပမေယျ့ iPhone အသဈတှမှော Reverse Charging လို Feature မြိုးသာ ပါဝငျလာခဲ့ရငျ Airpods2နဲ့ တှကျဖကျအသုံးပွုနိုငျမယျ့ Feature တဈခုလညျး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
Apple အနနေဲ့ ဒီနှဈထဲမှာ iPod Generation အသဈကို မိတျဆကျနိုငျတယျဆိုတဲ့ သတငျးတှေ ထှကျပျေါနပေါတယျ။ တကယျလို့မြား Apple မိတျဆကျမယျဆိုတဲ့ iPod ဆိုတာ iPod Touch မဟုတျပဲ Airpods ကို iPod လို Music Streaming Device အနနေဲ့ အသုံးပွုလာနိုငျမယျ ဆိုရငျရော? (ဟုတျသညျရှိ၊ မဟုတျသညျရှိ Airpods ရဲ့ ဘူးအဖုံးရှမေ့ကျြနှုာစာကို ဟိုးအရငျ iPod တှတေုနျးကလို Play, Pause ခလုတျလေးတှနေဲ့ iPod Shuffle အဖွဈသာ မွငျခဲ့ရမယျဆိုရငျ ဘယျလောကျတောငျ ကွညျနူးစရာ ကောငျးလိုကျမလဲ)
လောလောဆယျတော့ iPod (အဲလေ) Airpods2ရဲ့ ထှကျရှိနိုငျမယျ့ရကျကိုတော့ မသိရသေးပမေယျ့ ၂၀၁၉ ဇှနျလမတိုငျခငျမှာ မွငျတှရေ့နိုငျမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားကွပါတယျ။ ဒီတော့ Airpods2သာ တကယျထှကျလာခဲ့မယျဆိုရငျ သူနဲ့အတူ ခငျမြားတို့ရော Apple ရဲ့ ဘယျ Product အသဈတှကေို အတူတှဲပွီး ထှကျလာစခေငျြသေးလဲ?